Vaovao - Fampidirana dingana fanamafisana hazo
Fampidirana dingana fanamafisana hazo
SMAW (Shielded Metal Arc Welding) dia antsoina matetika hoe welding vy. Izy io dia iray amin'ireo fizotran'ny welding malaza indrindra ampiasaina ankehitriny. Ny lazany dia noho ny fahaizan'ny toetr'andro sy ny fahatsorana ary ny vidin'ny fitaovana sy ny fiasa. SMAW dia matetika ampiasaina amin'ny fitaovana toy ny vy malefaka, vy vy ary vy tsy misy fangarony.
Ahoana ny fomba fiasan'ny kofehy
Ny welding welding dia fizotran'ny fantsom-panafody. Mila electrode azo ampiasaina izay mifono fllux hametrahana ny lasitra, ary misy herinaratra elektrika ampiasaina hamoronana tsipika elektrika eo anelanelan'ny elektroda sy ny metaly izay mifamatotra. Ny herin'ny herinaratra dia mety misy onja mifandimby na ankehitriny mivantana avy amin'ny famatsiana herinaratra.
Raha apetraka ny lasitra dia simbaina ny firakofan'ny flux electrode. Izy io dia mamokatra etona izay manome gazy miaro sy sosona maloto. Samy miaro ny dobo mikarenjy amin'ny fahalotoan'ny atmosfera ny gazy sy ny sompitra. Ny flx dia manisy manampy scavenger, deoxidizers, ary singa manaparitaka amin'ny vy vy.
Electrodes mifono fllux
Azonao atao ny mahita electrode-coated electrode amin'ny savaivony sy ny halavany. Matetika, rehefa misafidy electrode ianao dia te hampifanaraka ny fananana electrode amin'ireo fitaovana fototra. Ny karazana electrode mifono fllux dia misy alimo, alimo alimo, vy malefaka, vy vy ary nikela.
Fampiasana mahazatra amin'ny fametahana kibay
Malaza erak'izao tontolo izao ny SMAW ka manjaka amin'ny fizotran'ny welding amin'ny indostrian'ny fanamboarana sy fikojakojana. Izy io koa dia mitohy ampiasain'ny orinasa indostrialy sy ny fananganana vy vy, na dia miha malaza aza ireo fantsom-boaloboka vita amin'ny flux.
Toetoetra hafa amin'ny fametahana kibay
Ny mampiavaka ny Shielded Metal Arc Welding dia:
Manome ny toerana rehetra miovaova
Tsy dia mora tohina amin'ny rivotra sy ny drafitra izy io
Ny kalitao sy ny fisehon'ny las dia samy hafa arakaraka ny fahaizan'ny mpandraharaha
Matetika izy io dia mahavita mamokatra karazana tadin-tsoloka efatra niraikitra: ny vodin-taolana, ny vodin-tongotra, ny T-joint, ary ny las-fillet
Ss Welding Electrode, Atsofohy vy vy vy, Kavina vy 1.5 Mm, Tsorakazo vy tsy mitovy, electrode welding, vy vy,